Organisation: ZANU-PF party
Questions surround Mugabe's future as Zimbabwe prepare to swear in new leader
Robert Mugabe, 92, backed for 2018 Zimbabwe election
Mugabe’s ability to last full term in doubt
Minister rejects Mugabe party 'kangaroo court'
A coalition government minister dismissed a proposal by Robert Mugabe’s party to bring British and American business chiefs before Zimbabwe’s media to denounce their countries’ sanctions.
Zimbabwe’s president Robert Mugabe said today he will retaliate against Western economic curbs imposed on his party.
Mugabe plans to regain power
Tsvangirai: Aide's arrest undermines accord
Zimbabwe's new prime minister today blamed the arrest of one of his top aides on factions who want to destroy the country's coalition government.
Tsvangirai colleague arrested before taking office
Hopes of a smooth transition for Zimbabwe's power-sharing government were dashed today when a leading member of the party opposing president Robert Mugabe was arrested.
Mugabe to form government without opposition
ZIMBABWE: President Robert Mugabe’s party said yesterday it is prepared to form a government on its own if the opposition won’t join it — a move certain to anger the West.
Both sides still at loggerheads over Zimbabwe deal
Zimbabwe’s President Robert Mugabe today risked a Western backlash by declaring he was ready to form a government on his own if the opposition refused to join him in power-sharing.
Mugabe shrugs off US and British attacks
Zimbabwe’s President Robert Mugabe today dismissed calls by Britain and the US for him to step down as “stupid”.
Mugabe hints at early elections
President Robert Mugabe said his party should be preparing for early elections - and he wants no repeat of his March loss.
No country brave enough to stop me, taunts Mugabe
A defiant Robert Mugabe today boasted that no other African country had the courage to remove him from power.
Zimbabwe’s leaders urged toshow ‘maturity’
SOUTH AFRICAN president Kgalema Motlanthe urged Zimbabwe’s political leaders to show “maturity” as they entered crunch talks yesterday aimed at saving their troubled power-sharing deal.
VP selections puts power-sharing Zimbabwe deal in jeopardy
ZIMBABWEAN president Robert Mugabe has sworn in two vice presidents ahead of talks on forming a cabinet, a government official has said, a move that could further endanger power-sharing negotiations.
Zimbabwe's failing economy switches to foreign currency
Zimbabwe began officially trading in foreign currency today in an admission that its own has collapsed.
Miliband gives cautious welcome to Zimbabwe power-sharing deal
Britain today gave a cautious welcome to a power-sharing deal signed today between political rivals in Zimbabwe.
Mugabe shouted down by his opponents
Opposition MPs heckled and jeered Zimbabwe president Robert Mugabe today as he opened the country’s parliament.
Zimbabwe opposition wins key speaker vote
ZIMBABWE’s opposition won the vote for speaker of the first parliament since disputed elections in March — apparently claiming votes even from the ruling party of autocratic President Robert Mugabe yesterday amid stalled talks over sharing power.
Zimbabwe's MPs elect opposition candidate as speaker
The candidate for Zimbabwe’s main opposition party was given the top job in parliament today after MPs were sworn in some five months after they were elected.
Opposition politicians arrested at Zimbabwean parliament
Two Zimbabwe opposition politicians were arrested today as they entered parliament to be sworn in, their party said.